Leader Fanilo : tsy manohitra befahatany izahay fa mitsikera | NewsMada
Leader Fanilo : tsy manohitra befahatany izahay fa mitsikera
Aiza ho aiza ny Leader Fanilo amin’ny toe-draharaham-pirenena? Eo ny lalan-tsarotra nolalovan’ny antoko… Nilaza ho tsy manohitra befahatany ry zareo, fa hitsikera ny tsy mety ary hiteny amin’izay…
“Hiteny sy hitsikera izahay, fa aoka tsy hosokajina tsotra izao hoe mpanohitra. Hitsikera hitondra hevitra sy zava-baovao izahay. Raha ao anaty fitondrana izahay, ka tena tsy mety aminay: miala izahay.”
Io no nambaran’ny filoha nasionalin’ny Leader Fanilo, Rabesa Zafera Antoine, namarana ny filankevi-pirenen’ny antoko, teny Andrainarivo, afakomaly. Nampiavaka ny Leader Fanilo ny fitiavana sy fahaizana mitsikera, ary manolo-kevitra ho tombontsoan’ny maro.
Tenenina ny asa tsy mety, fa tsy hita izay hitsikerana izay tsy miasa, raha ny nambarany momba ny fitondrana. “Olona tsy miasa ka toherina amin’ny fomba ahoana?”, hoy izy. Tsy hiroroka ha hankahala koa izy ireo, fa tsy mampiakatra ny Malagasy izany.
Hiteny momba ny fiainam-bahoaka ny antoko amin’izao birao nasionaly mpandrindra vaovao izao. Eo ny fisondrotry ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny harena an-kibon’ny tany… Miverina amin’ny fandraisana anjara amin’ny fifidianana rehetra toy ny nataony hatramin’izay ny antoko.
Manana ny fijeriny ny raharaham-pirenena ny antoko
Mihasahirana amin’ny fiantohana ny fiarovana ny olona sy ny fananany ny mpitondra, raha ny fehinkevitry ny filankevi-pirenena. Areti-mikiky ny rafi-panjakana rehetra ny kolikoly, hany ka manjaka ny tsimatimanota.
Lasa midadasika ny kolikoly avo lenta, ny fanodinkodinana volam-bahoaka, fanolorana asam-panjakana tsy ara-dalàna, fanondranana an-tsokosoko ny harena voajanahary, ny fivarotana tsy ara-dalàna tanin’olona na tanim-panjakana… Tsy ampy fitokisana ny manampahefana, indrindra ny mpitsara sy ny mpitandro filaminana, ny olona.
Tokony hifona eo anatrehan’ny vahoaka ny mpanao politika, fa tsy anamarin-tena foana. Tsy hasiana kandidà mahaleo tena intsony amin’ny fifidianana, ary tokony ho vitsy ny isan’ny antoko politika.
Mijanona ho Leader Fanilo ry Rakotomamonjy Jean-Max
“Azo eritreretina ve hoe roahina amin’ny antoko ireo mpanorina azy?” hoy ny antoko ny amin’ny fandroahan’ny birao nasionaly mpandrindra teo aloha ireo mpikambana miisa 13. Na izany aza, nesorina tsy ao anaty rafi-pitantanana intsony ry Rakotomamonjy Jean-Max, fa tsy nalana tsy ho Leader Fanilo. Hanapaka momba azy ireo ny filankevi-pifehezana, fa tsy ny filankevi-pirenena. Hilamina amin’izay?